XOG: SADDEXDAN Arrimood Oo Sabab U Noqon Kara In Real Madrid Ay CAAWA Ka Hadho Champions League – Latest Sports News
XOG: SADDEXDAN Arrimood Oo Sabab U Noqon Kara In Real Madrid Ay CAAWA Ka Hadho Champions League
Real Madrid ayaa caawa ku martigelinaysa Ajax kulan muhiim ah oo ka tirsan Champions League. Saadaasha guusha ee kulanka oo laga soo tixraacayo lugtii hore ee 2-1 kusoo dhamaatay, waxa loo badinayaa Real Madrid oo kusoo shaqaysatay ciyaaartii Martida ay ahayd, hase yeeshee kubadda cagta waxa jira waxyaabo xaasaasi oo ka dhiga mid aan la saadaalin karin marxaladaha qaarkood, waxaanay taasi keentay in Los Blancos ay ogsoonaato in aanay haysanin wax u damaanad qaadaya inay ka adkaanayso Ajax iyadoo weliba maanka ku haysa marxaladda adag ee ay ku jirto iyo hoos-u-dhaca ciyaareed ee ay gashay.
Real Madrid waxay kaalinta saddexaad kaga jirta kala-sarraynta horyaalka LaLiga, waxaanay 12 dhibcood ka hoosaysaa Barcelona oo hoggaanka haysa, isla markaana Sabtidii ku karbaashtay 1-0 ka hor afar maalmoodna 3-0 ku xasuuqday, kana reebtay Copa del Rey. Marka la eego natiijada iyo dhibcaha ay haysato, waxa si cad loogu doodi karaa in tartamada maxalliga ah ay Real Madrid ka qadayso xili ciyaareedkan, gaar ahaan LaLiga oo ay weli kusii jirto halka Copa del Rey ay mar horeba kasoo hadhay.
Xaaladdani waxay kasii liidataa midkii xili ciyaareedkii hore ay Los Blancos ku jirtay oo ay kaalinta saddexaad ka gashay horyaalka LaLiga, isla markaana ay koox yari ka reebtay Copa del Rey, balse waxay awood u yeelatay in markii saddexaad oo xidhiidh ah ay ku guuleysato Champions League, taas oo maskaxday guul-darrooyinkii gudaha dalkeeda.
Inkasta oo kulankii hore ee ay joogtay Amsterdam ay kooxda reer Spain kusoo adkaatay 2-1, haddana Ajax ayaa ahayd kooxda ciyaarta wanaagsan, isla markaana samaysay isku-dayga ugu badan, gacan ku haynta ciyaartuna dhinaceeda ahaa, isla markaana samaysay gool toogashadii ugu badnayd. Waxa intaa u dheeraa, in Ajax ay heshay gool laga diiday oo muran ka dhashay.
Dhinaca kale, Ajax waxay horyaalka dalkeeda ee Eredivise kaga jirtaa kaalinta labaad iyadoo shan dhibcood ka dambaysa PSV oo hoggaanka haysa, balse waxa la dheer yahay hal ciyaar oo ay kusoo gaabin karto farqiga dhibcaha laga horreeyo. Waxa kale oo ay meel fiican joogtaa tartanka KNVB Cup oo ay kulankeedii ugu dambeeyey ku karbaashtay naadiga weyn ee Feyenoord.
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa saddex arrimood oo Ajax ay ku garaaci karto Real Madrid, isla markaana ay kaga cidhibtiri karto rajada kaliya ee ay ka leedahay xilli ciyaareedkan oo ah Champions League.
1 Qaab Ciyaareedka Liita
Kulanka caawa ayaa waxa uu kusoo beegmay xilli ay Los Blancos ku jirto xaalad qallafsan, isla markaana ay guul la’aan ahaayeen saddexdii ciyaarood ee ugu dambaysay oo laba jeer ay Barcelona karbaashtay, halka ciyaarta kalena ay Girona oo ay Barca deris yihiin ay ka adkaatay.
Inkasta oo qaab ciyaareedkeeda guud ee Real Madrid ay kala hortagtay Barcelona uu ahaa mid wanaagsan, haddana dhibaatada haysata ayaa ah in aanay ku fiicnayn dhalinta goolasha, waana sababta ay Barcelona labadii kulanba ugu garaacday liidashada afkeeda hore. Inta badan ciyaartoygeeda sare, sida Toni Kroos, Karim Benzema, Gareth Bale, Marcelo iyo Luka Modric uma ciyaarayaan sidoodii ugu fiicnayd, waana musiibo sii socon doonta kulanka caawa oo faa’iido u noqon karta Ajax.
Waxa intaas dheer, kulamada ay Real Madrid garoonkeeda ku ciyaarto oo ah kuwa ay natiijada ugu xun ka helaysay xili ciyaareedkan, waxaana lagaga adkaaday lix jeer, taas oo ka dhigan in qarniga 21aad ay guul-darrooyinkii ugu badnaa kula kulantay xili ciyaareedkan.
Marka laysku soo duubo dhibaatooyinkan, waxa Santiago Bernabeu ka jiri doona walaac Ajax siin kara fursad ay ku garaacdo Real Madrid oo ay kusoo afjarto rajada kaliya ee ay xili ciyaareedkan qabto.